Fa santionany, ny fe-potoana dia ny 7-10 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 45-60 andro aorian'ny fandraisana ny petra-bola fandoavam-bola, ny fotoana hitarika ho mahomby, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha ny firaka fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Afaka manao ny fanonerana ho an'ny banky, TT: 30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana manohitra ny kopian'ny B / L.